Ny fiakaran'ny efijery faharoa | Martech Zone
Ny fiakaran'ny efijery faharoa
Alahady, Novambra 4, 2012 Sabotsy 3 Novambra 2012 Douglas Karr
Nanoratra momba ny ho avin'ny Fahitalavitra sosialy, fa ny tena izy dia efa eto ny efijery faharoa. Ankoatra ny fandehanana amin'ny sarimihetsika, rehefa ao an-trano ny fahitalaviako dia manana laptop, tablette na iPhone-ko foana aho. Ny efijery faharoa dia voajanahary amiko… ary nanjary nalaza ho an'ny olon-kafa koa izany!
Manova ny doka amin'ny fahitalavitra sy ny fametrahana ny vokatra
Ahoana no fanovana an'io amin'ny fomba fivarotana? Ho an'ny iray, ireo orinasa manao doka amin'ny fahitalavitra dia tsy maintsy mampiditra tetika an-tserasera. Ny fananganana tranokala mora hahitana pejy fitobiana izay mora lanina amin'ny finday na tablette dia ilaina. Ny varotrao dia tsy tokony hanana twitter kisary Facebook fotsiny, tokony hanana pejy fitobiana izay minia apetraka eo ho an'ireo mpandinika izany. Azoko atao ny manoro hevitra ny fananana làlana / fahitalavitra amin'ny tranokalanao miaraka amina pejy voalamina tsara sy mora voahidy miaraka amina endritsoratra lehibe sy toerana fotsy maro ahafahan'ilay mpampiasa miasa.
Ary aza gaga amin'ny zava-misy eo akaiky eo amin'ny teknolojia fanaovana sonia tanana. Ny fangatahana findainao na findainao dia tsy ho ela dia mahazatra izany rahoviana mijery seho fahitalavitra manokana ianao na aseho dokambarotra. Alao an-tsaina ny rindranasa iray izay manome anao rohy sy tolotra ara-bakiteny eo am-pijerena… mifangaro amin'ny takelakao raha mijery mivantana ianao na mandinika fampisehoana efa voarakitra an-tsoratra.
Manova ny fahalalan'ny mpampiasa sy ny fitondran-tenany amin'ny tranonkala
Ho an'ireo orinasa izay tsy manao doka amin'ny fahitalavitra, midika izany fa - mihoatra ny taloha - lakilen'ny fananana tranokala sy rindrambaiko haingam-pandeha sy fampiharana ary pejy voavaha tsara izay mora hita ao amin'ny karoka. Mino aho fa ny efijery faharoa dia misy fiatraikany LEHIBE amin'ny fahalalan'ny mpampiasa raha ny fahitana ny pejin-tranonkalanao no jerena. Ny mpampiasa dia misy lahasa maro, ny fifantohana dia mbola ambany lavitra. Ilay fitsipika taloha 2 segondra momba ny fijerena pejin-tranonkala iray ary ny fahazoana ny momba izany dia mety nihena ho iray segondra.
Ny fampiasana rindranasa fifandraisana sy famoahana nomerika hampitomboana ny fotoana amin'ny tranokala sy ny fifaneraserana dia tena ilaina. Ny fiakaran'ny efijery faharoa dia hanohy hanova ny fihetsiky ny mpampiasa… mihetsika izao!
Tags: fantsom-peofahitalavitra faharoafahitalavitra sosialytv sosialysocialtv
Ny Playbook fahazoana rohy
Ny làlana mankany amin'ny varotra maoderina
5 Novambra 2012 à 1:04
Heveriko fa tsy ho ela izany raha tsy hitantsika fa mitambatra tanteraka ny fahitalavitra sy ny Internet (toy izany koa no hitranga amin'ny onjam-peo)